Fitiavana a, fitiavana! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny tomanin-jaza mena, ilay karama vary masaka, ny fahorian-jazavavy, ny fiakaram-bidim-piainana, ny saringim-borin-damba, ny halabotry sy ny etsetra… Ireo rehetra rehetra ireo no hanaovan’ity nanoratra ity tononkalo ity Antso avo amin’ny mpanoratra tononkalo. Efa maro ireo ary tsapa fa miantefa mivantana amin’ny manjo ny tsirairay sy ny maro an’isa ny olana notanisainy.
Hiantsoako anao poeta
ny tomanin-jaza mena
mitaky ny sakafony
ny hany azony nomena
arahin-jery feno pitra
ilay karama vary masaka
ambava loza aman'aina
nefa ny azy avo sasaka
tamin'ny tombony nalaina
fa nolaniany avy hatrany
tamin'ny toerana mangiana
mitalaho sy mba niangavy
fa hariva ny fodiany
nefa tsy noraharahiana
mampihaika ny vahoaka
mahadomelina ny loha
lasa foana ny fisainana
nefa tsy afaka mitsoaka
handositra ho aiza moa?
ny ifin-tsalotra nihafiany
tanaty alin'ny ririnina
tsy misy nahita angamba
vory an-tratra ho fihinina
ny halabotry sy ny etsetra
any ambanivohitra any
satria lavitra ny andriana
feno karazana herisetra
efa namoizana izay tiana
ireny rehetra rehetra ireny
akorisao re ny penina
ataovy ho tati-bolan-jaza
andrao ny vato no hiteny
tandremo misy afenina
na ny kely indrindra aza
ANTSO AVO ho anao tokoa
Meteza re ho masoivoho.
Rehefa zohina dia tsy voatanisa ao anatin’ny ny vaovao maro samy hafa nahasarika ny saina aman’eritreritra niarahantsika nandre sy nanaraka teto amin’ny tambazotra fiseraserana na ny fesiboky (Facebook) izany. Maro tokoa ireo vaovao nahaliana teto. Teo ny resaka pesita, ny resaka lozam-pifamoivoizana, ny dorotanety tany Isalo…
Tsy hoe tsy noresahan’ireo mpanakanto akory ireo zava-nisy vao haingana fa isika no nisafidy tsy handray an’ireny amin’ity indray mandeha ity. Tsy hoe nanaovantsika be marenina ny Antso avo nozaraina eto fa ndeha mba hiova lasitra isika. Ndeha resaka fitiavana izay Safidim-po no hifampizarana.
Na sondenda io na banga,
dia io no miavaka fa manja!
Na sampona aza sarobidy,
satria ny fo no misafidy!
Na akoraina fa ho adala,
tafian-damba fa malala!
Telina io na dia mangidy,
satria ny fo no misafidy
na mety endrika ivelany;
dia soa tsy manampaharoa,
f’izay ‘lay hoe “safidim-po”
Fitiavana mandoro. Fitiavana entam-barotra. Fitiavana mandratra. Maro ireo azo hikilasiana ny fitiavana araka ny hita eo amin’ny sary izay tazana ny loharanao nangalana azy. Ilay fitiavana mandratra no ndeha ho resahana ka izay efa niainan’ny sasany na nalainy antsaina no ho zaraina amintsika eto.
Toa mankadilo sofina,
tsy afak' hiadanana,
fa fitaka, lomorina!
Ny tiako, tiako ianao,
mora taomina any!
Diso haza ianao,
'ndeha mivily lalana
tsy te-hierika aho!
13 septembre, 22:31 ·
Raha fitia tsela-baratra
Aza entinao aty amiko
Fa fitia mora mitsahatra
Ka tsy mamiko
Nefa fitia tsy tena raitra
Raha fitia afo kasoka
Aza entinao manadala ahy
Tsy ilaiko fa fitia vasobasoka
No hakana fanahy
Alako mora tsofin-drivotra
Lamba manify mora rovitra
Raha fitia nofinofy
Aza entinao andrebirebena
Fa miserana sy marofy
Tsy ahitana valim-babena
Alako fitia tsy tanteraka
Doloïer sy ny Kantony
Na teo aza ny filazana sy fanairana fa tsy mila ilay fitiavana mandribiriby dia ao ireo ao anatiny vao mahita ny andaniny fa mila haningotra ny aina ilay ankilany. Ny fahendrena dia misintaka.
Teo antetezana hiampita
No solafaka ny dia
Teo no very ilay fitia
Teo no tapaka ny lalana
Ilay nitopy faratazana
Teto izao no ora farany
Andoavana ny sarany
Dia nisento teo ny alina
Teo amorondrano lalina
Nefa iry ery ampita
Feno kintana ny lanitra
Ny rivotra mitsoka
Mampaniry te hifoka
Ilay niriako ho takarina
Teo ny ora no niato
Teo ny fanahy niziriziry
Ho mariky ny foko tia
Tia anao doria doria.
Amin’ny manaraka isika miresaka ny fitiavana mahasoa. Samia velon’aina. Ny fotoam-bita tsy mahaleo ny sampona koa aleo tsy asiana daty na ora fa ny toerana dia eto hatrany hoy Ratalata.
Christmas symphony : Airtel Madagascar soutient le groupe Quatuor Squad - il y a 6 mois